🥇 ▷ Nokia 7.2: waxay xaqiijisay taariikhda la soo bandhigay ✅
Nokia 7.2: waxay xaqiijisay taariikhda la soo bandhigay
Waxay laga yaabaa inay jirtay labo sano tan iyo markii ay kala go’day Microsoft, laakiin Nokia waxay ku rajo weyn tahay inay ku laabato meesha ugu sareysa. Tartiib tartiib tartiib ayey u soo saartaa inay u keento badeecad ka fiican suuqa isla mar ahaantaana waxay kubad ka dhigataa khiyaanada nostalgia iyagoo u tagaya qayb ka mid ah adeegsadayaasha doonaya kaliya taleefanka gacanta. Laakiin maanta waa inaan kahadalnaa udub dhexaadkiisa ugu dambeyntiina waa la xaqiijiyay Taariikhda soo bandhigista Nokia 7.2.
Nokia 7.2 waxay imaan doontaa IFA 2019
Naqshad casri ah, oo leh shaashad shaashad ah iyo kamarad gadaal gadaal leh oo leh qaab toosan iyo Android Mid gudaha ah. Kuwani waa qaar ka mid astaamihii ay shirkadda Finnishku go’aansatay inay ku soo rogto Nokia 7.1 bishii Oktoobar ee sannadkii hore. Laakiin wakhti ku filan ayaa u gudbay qofkii beddela oo yimaadda taasina waa tan maanta ay sii daayeen Nokia 7.2 xog cusub.
Terminalka-dhexe ee khadka dhexe ayaa si dhakhso leh dunida loogu muujin doonaa, gaar ahaan inta lagu gudajiray IFA 2019. Carwada Jarmalka ayaa ah agagaarka geeska waana waqti la doonayo in Terminalka guud ahaan loo yaqaanno. Xaqiiqdii, tani maahan waxa kaliya ee la soo saaray 9to5Google oo waxaa soo muuqday sawiro dhabarkiisa ah. Ka dib markaad raacdo waxaad arki kartaa inuu hayn karo qalabka gadaashiisa iyo in kaamirooyinka lagu habeyn doono meel yar oo wareegsan. Zeiss ayaa bixin kara muraayadaha indhaha mar labaad, isagoo ugu weyn 48 MPX.